पत्रकारलाई कांग्रेसको कालो झण्डा ! – Everest Dainik – News from Nepal
पत्रकारलाई कांग्रेसको कालो झण्डा !
काठमाडौं, कार्तिक १० । नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरले पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि चढेको गाडीलाई कालोझण्डा देखाएको छ ।
शुक्रबार कञ्चनपुरको बेलौरीमा आयोजित प्रथम बेलौरी महोत्सवको उद्घाटनमा पुगेका पत्रकारका नेताहरुलाई कांग्रेसले कालोझण्डा देखाएको हो ।
कांग्रेसका कार्यकर्ताले सडकपेटीमा उभिएर पत्रकार चढेको गाडीलाई कालोझण्डा देखाएका हुन् ।
बेलौरी महोत्सवमा आयोजकले सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिलाई मात्र बोलाएको र पार्टीलाई निम्ता नगरेको भन्दै कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता आक्रोशित बनेका छन् । आक्रोशित बनेका कार्यकर्ताले महोत्सवमा आउने सबै आगन्तुकमध्ये पत्रकार चढेको गाडीलाई कालोझण्डा देखाएका हुन् ।
कांग्रेस कार्यकर्ताले मन्त्री मगर चढेको गाडी भन्दै पत्रकारको गाडीलाई कालोझण्डा देखाएपछि स्थानीय आश्चर्यचकित भएका थिए । यसबारे कांग्रेसले अहिलेसम्म आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
पत्रकार महासङ्घका कञ्चनपुर नेता राजेन्द्र अवस्थीलाई पत्रकार महासङ्घको गाडीमा कालोझण्डा देखाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छन् । उनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै पत्रकार र मन्त्रीको गाडी पनि नचिन्ने भन्दै व्यङ्गसमेत गरेका छन् ।
ट्याग्स: Belauri, kanchapur